चक्रब्युहमा फस्दैछन् प्रधानमन्त्री: न निर्वाचन, न संविधान संशोधन | Radio Langtang 90.3 Mhz
चक्रब्युहमा फस्दैछन् प्रधानमन्त्री: न निर्वाचन, न संविधान संशोधन
Post on: January 27, 2017
१४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सिंहदरबारको तातो कुर्सी ‘भालुको कन्पट’ जस्तै बन्न थालेको छ । भालुको कान समातिराखौं भने कहिलेसम्म समातिराख्ने ? छाडौं भने यो भालुले आफैंलाई टोक्छ ।
अर्थात, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराखौं भने संविधान कार्यान्वयन र चुनाव दुबै नहुने, कुर्सी छाडौं भने असक्षमताको आरोपले आफैंलाई खाइदिने । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला दोभानमा फसेका छन् ।
अलपत्र संविधान संशोधन
प्रचण्ड सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई महिना पुग्दासम्म अलपत्र अवस्थामै छ । सरकारले यसलाई चाँडो अगाडि बढाउने बताए पनि दुई तिहाइ जुट्ने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन । कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारले संविधान संशोधनमा समर्थन जनाइसकेको अवस्था छैन । बरु उनीहरु सरकारसँग टाढिँदै जान थालेका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्ने अडान राखिरहेको छ । एमालेले एक्लै हैन, साना ८ वटा दललाई पनि साथमा लिएर दुई तिहाइ पुग्न नदिने रणनीति अपनाइरहेको छ ।
यो स्थितिमा संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव कथंकाल प्रक्रियामै गइहाल्यो भने पनि यो पास हुने निश्चित छैन । तर, पास भएन भने निर्वाचनमा जान नदिने र आन्दोलनमा उचिने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताइरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने यो प्रस्तावले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पाएन भने त्यसले चुनावलाई असर गर्छ ।
तर, एमालेले समर्थन नगर्दासम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव पासु हुन गाह्रो छ । त्यसका लागि राप्रपा र लोकतान्त्रिक फोरमको समर्थन सरकारलाई जरुरी हुन्छ । जुन, सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
सरकारले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनिरहेको छ । तर, जेठमा चुनाव गर्नका लागि केही अवरोधहरु छन्, जुन यस्ता छन्-
जेठमा चुनाव गर्ने हो भने अहिले नै मिति घोषणा गनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यही भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारण छन् । एकतर्फीरुपमा मिति घोषणा गर्दा कथंकाल मधेसी मोर्चाले मानेन र सरकारको समर्थन फिर्ता लिइदियो भने सो चुनाव विगतमा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको जस्तै असफल होला कि भन्ने प्रचण्डलाई डर छ । साथै मधेसी मोर्चालाई धोका दिएको आरोप आफूलाई लाग्ने र माओवादीको राजनीतिक लाइनमाथि नै प्रश्न उठ्ने पनि प्रधानमन्त्रीमा भय देखिन्छ ।
र, प्रचण्डको मनमा पलाएको डरजस्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि उनलाई भनिसकेका छन् कि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म चुनाव हुन दिन्नौं । र, मधेसी मोर्चाका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि भनेका छन् कि संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा पनि हामी चुनावमा जान्नौं, आन्दोलनमै जान्छौं ।
यो स्थितिमा जसरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्यौलमा छ, त्यसरी नै जेठमा गर्ने भनिएको चुनाव पनि निर्वाचन पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ । निर्वाचन कानूनहरु त संसदले पास गरिरहेको छ, तर चुनावको मिति घोषणा गर्न ढीला भयो भने चुनाव नहुने स्थिति आउन सक्छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन घोषणा जसरी अलपत्र पर्दैछ, त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सीलाई समेत अलपत्र पारिदिने स्थिति छ । र, यो स्थिति आओस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल धूप हालेर बसेको अवस्था छ ।
केपी ओली सरकारलाई हटाएर बनेको प्रचण्ड सरकारको कार्यभार भनेको संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो ।
तर, संविधान संशोधन र निर्वाचन दुबै गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग तेस्रो विकल्पमात्रै बाँकी हुनेछ, देउवालाई सत्ता सुम्पनु । यो अवस्थामा निश्चित छ कि प्रचण्ड असफल प्रधानमन्त्रीमा दरिनेछन् । र, उनले अघि सारेको राजनीतिक एजेण्डा पनि अलपत्र पर्नेछ । प्रचण्ड अलपत्र पर्नेछन् ।
असक्षम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित चक्रब्युहबाट बाहिर निस्कन अभिमन्युजस्ता प्रचण्डसँग अब के विकल्प छन् ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीका केही मनोगत ‘एसेस्मेन्ट’बारे चर्चा गरौं ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटो पास गरियोस् भन्नासाथ प्रचण्डले भन्छन्- हुन्छ, अब म तत्कालै कमल थापा र विजय गच्छदारसँग कुरा गर्छु । तर, थापा र गच्छदार प्रचण्डसँग टाढिन थालेको या त उनलाई थाहा छैन, वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गर्न उनी विवश छन् ।
राप्रपा सरकारमै बसेर तर मारिरहेको छ, तर संशोधन प्रस्तावमा अहिलेसम्म प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा छ । कांग्रेसका हातमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय कमल थापालाई दिएर सरकारमा ल्याउनेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग ह्याउ देखिँदैन । केही गर्न खोज्यो भने शेरबहादुर देउवाले थर्काइहाल्छन् ।
विजय गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन लाग्दा प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाले थर्काएका कारण उनले बेलैमा यो निर्णय लिन सकेनन् । अहिले गच्छदारलाई दिने मन्त्रालय पनि कांग्रेसबाटै बुकिङ भइसकेको छ । कांग्रेसले पाएको मन्त्रालय त्याग गर्ने कुरै भएन ।
यो स्थितिमा प्रचण्डले गच्छदार र कमल थापासँग कुरा गरेर संविधान संशोधन पास गर्छु भन्नु उनको मनोगत बुझाइ हो । जतिबेला प्रचण्डले थापा र गच्छदारसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसबेला उनलाई हेलिकोप्टर चढेर ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजना’को भ्रमण गर्दैमा फुर्सद मिलेन । अहिले समय निकै घर्किइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम घडीमा एमालेले पनि संविधान संशोधनमा समर्थन जनाउने बताउन छाडेका छैनन् । यो उनको अर्को भ्रम हो । एक दिन शेरबहादुर देउवाले भनिदिएका थिए कि ओलीलाई म चिन्छु, उनले आफैं आएर संशोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्छन् । र, देउवाको यही कुरालाई पत्याएर प्रचण्डले भन्दै आएका छन् कि ओलीले अन्तिम घडीमा संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्छन् ।
तर, एउटा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रष्टैसँग भनिसकेका छन् कि नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न भने पढ्नुहोस्, तर मैले नेपाली भाषामा बारम्बार भनिरहेको छु कि यसमा समर्थन हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एमाले आउँछ एमाले आउँछ भनेर जसरी बोलिरहेका छन्, यसमा या त उनी जनतालाई झसक्याउँदै छन् या उनी आफैं एमालेलाई नचिनेर भ्रममा परेका छन् । संविधान संशोधनको विपक्षमा एमाले एक ढिक्का छ । बरु प्रधानमन्त्री नै भ्रममा देखिएका छन् ।
यिनै भ्रम र भुलभुलैयामा रुमलिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहिले देउवाका कुरा पत्याएर त कहिले अरु कसैका कुरा पत्याएर एमाले आउँछ एमाले आउँछ भनिरहेका छन् । यथार्थमा चाहिँ एमाले नजिक आउने त परै राखौं, सरकारमै भएको राप्रपासमेत उनीसँग टाढा हुन थालिसकेको अवस्था छ ।
के छन् प्रचण्डका विकल्प ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनमा अर्को पूरक संशोधन हाल्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्रिय सभाको मताधिकार हेरफेर सम्बन्धी त्यो पूरक प्रस्ताव मधेसी मोर्चालाई नै खुशी पार्न ल्याइन लागेको हो, त्यसले एमालेलाई नजिक ल्याउँदैन । बरु आशन्न स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई त्यसबाट ‘ब्याक फायर’ हुने खतरा छ ।
k|d;Fu g]kfn kqsf/ dxf;ª3
k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn dªunaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn’jf6f/df g]kfn kqsf/ dxf;ª3sf kbflwsf/Lsf] e]6sf qmddf af]Nb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
त्यसैले प्रचण्डले भनेको पूरक प्रस्तावको यो विकल्प ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ लगाएजस्तो मात्रै हुनेछ ।
अर्को विकल्प भनेको माघ १५ भित्रै चुनावको मिति पनि घोषणा गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि छलफल गर्दै जाने भन्ने प्रचण्डको पुस्ताव छ, जसलाई मंगलबार साँझ बालुवाटार बैठकमा मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
यो स्थितिमा अब प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले नमान्दा नमान्दै चुनावको मिति घोषणा गरे भने के होला ? त्यसले एमालेलाई केही नजिक ल्याउन सक्छ, तर मधेसी मोर्चा टाढा जान सक्छ । तर, १८२ सीट भएको एमालेलाई नजिक र तीन दर्जन सीट भएको मोर्चालाई टाढा गराउने हिम्मत प्रचण्डलाई उनको ‘राजनीतिक लाइन’ ले गर्न दिँदैन । र, उनका राजनीतिक पार्टनरहरुले पनि गर्न दिँदैनन् ।
निश्कर्षमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाल्ने अबका स्टेपहरु यस्ता हुन सक्छन्-
१. संविधान संशोधन पनि नगर्ने, चुनावको मिति घोषणा पनि नगर्ने, हेलीकोप्टरमा डुलिराख्ने र यत्तिकै हिउँद कटाउने । संविधान कार्यान्वयनको मूल्यवान समय गुजारिरहने । जनताको गाली खाइरहने । प्रधानमन्त्रीबाट हत्पत्ति राजीनामा पनि नदिने र देउवालाई अत्याउने ।
-यसो गर्दा कांग्रेस र एमाले नजिकिने सम्भावना बढ्छ । समय घर्कियो भने व्यवस्थापिका संसदको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने हुन सक्छ । )
२. मधेसी मोर्चाले हुँदैन भन्दाभन्दै तत्कालै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने । त्यसपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भए पनि वा नभए पनि देशलाई चुनावमा होम्ने । चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन प्रयास गर्ने र चुनावको सुनिश्चितता सँगै सरकारबाट काँध फेर्ने । यसरी सहमतिमा सरकार परिवर्तनसँगै कमल थापा र विजय गच्छदारलाई पनि देउवाको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराई संविधान संशोधनमा सहमति गराउने । र, त्यहीबेलामा सकेसम्म एमालेलाई पनि देउवा सरकारमा ल्याउन कोशिस गर्ने । अनि यति गरेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने ।
(यो विकल्पबाट राष्ट्रिय सहमति जुट्न गई संविधान कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ । तर, यस्तो सम्भावना निकै कमै छ । )
३. दलहरुवीच समझदारी हुन सकेन भने ‘मैले सकिँन है’ भनेर आत्मालोचनासहित शिवजीले समुद्र मन्थनबाट निस्किएको विष पिएजसरी दोष पिउँदै शेरबहादुर देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने ।
(यसो गर्दा केही समय प्रचण्डलाई जनताले गाली गरे पनि राजनीतिक गतिरोधले नयाँ बाटोको खोजी गर्न पाउँछ र कमसेकम संविधान कार्यान्वयन धरापमा पर्दैन । या त फेरि मुलुक ओलीकालीन परिस्थितिमै फर्किन्छ । )
४. प्रचण्डसामु रहेको अर्को बाटो भनेको मधेसी मोर्चाले चुनाव गर्न नदिएको झोंकमा राजनीतिको कोर्ष बदल्ने र १६ बुँदेमा जस्तै कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तीनदलीय गठबन्धन ब्युँताउने र संविधान घोषणामा सफल भएजस्तै तीनवटै चुनाव सफल पार्ने । यसो गर्दा कमल थापा र विजय गच्छदारलाई विगतमा जस्तै साथमा लिने ।
(यो बाटो हिँड्दा मधेस र पहाडवीच फाटो बढ्न सक्छ । यद्यपि शक्तिको सिद्धान्तअनुसार बलपूर्वक नै भए पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । र, यसलाई संविधान कार्यान्वयनको ‘फोर्स ल्याण्डिङ’ पनि भन्न सकिन्छ । यो बाटोबाट तत्कालीनरुपमा ‘पहिचानवादी’हरुको राजनीतिक हार हुन्छ र केपी ओलीको लाइनको नैतिक जीत हुन्छ । तर, देशभित्रका सामाजिक-राजनीतिक अन्तिविरोधहरुको दीर्घकालीन समाधान भने यसबाट हुँदैन, तत्कालीन संकट बलपूर्वक हल हुन सक्छ । )
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन बाटो लेलान् ? यो उनले आफैं जान्ने कुरा हो । तर, कुनै न कुनै जोखिम नमोलिकन यसैगरी ‘आइडल’ भएर बसिरहने छुट अब प्रचण्डलाई छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्- म जोखिम मोल्ने नेता हुँ ।
यसरी बनेको थियो छक्का पञ्जाको गीत ‘पूर्व-पश्चिम रेल’
‘बलिदान’ फिल्मका जोशिला गीत यसरी जन्मिए
ट्वाइलेट पेपरभित्र लुकाएर ल्याएको १७ किलो सुन बरामद
रसुवा मंसिर २, चीनको केरुङ नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको १७ किलो सुनसहित एक जनालाइ रसुवा प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ ...
चीनबाट १ लाख ३७ हजार थान निर्वाचन साम्रगी आयात
रसुवा , कात्तिक १५ – आउँदो मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको लागि चीनबाट निर्वाचन सामग्री ...
रसुवामा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
रसुवाको आमाछोदिङमो गाँउपालिका–५ सिम्बुमा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार मोरङ ...